Ukuphepha kukhona kagesi skateboard amafemu babuze imibuzo engcono? - Jomo Technology Co., Ltd
Ukuphepha kukhona kagesi skateboard amafemu babuze imibuzo engcono?
Ngokuphathelene ukwakha we skateboard, ungase kudingeke nokuba acabange ezinye izici ngendlela. Uma uthanda la umqondo wezwe elingaphansi skateboard kagesi , kodwa athande ukusetha kwakho samanje, udinga sibheke Eon: esiyinhloko Modular powertrain kagesi. Ezweni okusheshayo kuhambisane nesivinini sokufunda komfundi efana neyethu, ijubane futhi intengo kahle abaluleke izakhi into ngokwalesi zokuthutha. Yilokho kuphela. Kodwa ufana nemoto, velocity ziyahlukahluka kukhona ngaphezu kwalokho okubalulekile, ngoba awukwazi nje ayeke Midway futhi ukushaja wasukuma phakathi komgwaqo. Ngaphezu kwalokho, uma uwa phansi, roll uze uyeke ukuba adede skidding. It bazilungiselela nge ezikude ephathwayo esikuvumela uqale ke, ukuyimisa futhi siguqula velocity, futhi izindlela ezimbili ukuze kuhlaliswe amakhasimende amasha noma onekhono. Kulula ukubona ukuthi kungani lezi zici kakhulu kuthinte ukufaneleka kanye nokusebenza. Kuyinto engumngane omuhle kakhulu ngoba uhambo off-road, Nokho kungcono clunky kakhulu i kuhlalwe ukusetshenziswa ezivamile.
Ngakho ukuthi yini enhle kangaka ambalwa skateboard kagesi? Ungathola futhi out ekuphathweni okude kanye skateboard yakho siphathwe ugesi. I inboard kwaba kancane ohlangothini esindayo kodwa ngokusobala lapho kubunjwa elikude empeleni sasivumela Ukuthokomala ukubamba, ngoba ngokuyisisekelo ingxenye kakhulu. Ngemva kokuchitha eduze amahora 200 bacwaninga brand ephelele futhi onobuhle emakethe, sasithenga amapulangwe 10 eziphezulu ezitholakalayo emakethe njengamanje lo isikhashana bese wabalinga isici-by-side ukuthola e-skateboard empeleni usubusa bonke babo! Sesenze eziningi skateboard kagesi okuhlaziya bafuna ukuthola ukuthi ibaphi amabhodi kukhona kakhulu engcono skateboard kagesi . Kuvele skateboard kagesi kwehlukile skateboard ejwayelekile ngokuba isithako esinenjini eyenza usebenzisa skateboard iyonke heck of kunalokho okuningi lula umgibeli entsha futhi inikeza khahlela soqobo i umgibeli abanolwazi. Inani - Njengomthetho oyisisekelo we-thumb, nge skateboard kagesi uthola ukuthi ukhokhela.
Kahle. Eqinisweni, skateboard kagesi ungomunye okungcono ongakhetha ezihlukile Kugcine Mile zokuthutha. Koowheel kokuxazulula ngokuqinile wethula umlando Abane isondo Electric Skateboard nge motor ayiwele naye, esetshenziselwa emfushane ibanga abahambahamba nokunye. Ngaphakathi umlando Isivinini ejwayelekile 30KM / h, ukuphila kwebhetri kungenzeka kube ngu-20 kuya ku-25KM. Uzokwazi ukuba nifunde uhlelo oluphelele lwe Dynacraft kagesi skateboard Uhlolojikelele lapha. Noma ngabe zokufuna eyolanda yokuchitha isizungu omusha noma nje bheka ukuphequlula cool kwendawo egandaywe ngamatshe, ebanda kunazo skateboard kagesi lapha kuwe ukuze uhlole. Ngamafuphi - ukuze ukwazi okusheshayo, onokwethenjelwa futhi ngaphezu kwakho konke kakhulu ukhululekile skateboard kagesi, ke koowheel 2 isizukulwane kooboard yilokhu elisheshayo! Isici kubalulekile ukuthi imodeli uthenga akumele skimp on iyona ukukhethwa pre-isethi ogibele izindlela. Lezi amadivayisi zokuthutha kukhona ephathekayo futhi lusekelwa ngamandla ebhethri elishajekayo ezingasetshenziswa kokubili kufanele kusetshenziswe njengoncedo uhlobo yakho eyinhloko yokuthutha noma lingasetshenziswa ukuthola futhi kusukela ezokuthutha zomphakathi. Lokhu longboard umnyuziki isebenzisa ibhethri lithium-ion ukuletha-zip ngokwengeziwe Longboarding wakho ujabulise, ukushaya ngesivinini kuze kufinyelele 26 mph (42kph) ukusetshenziswa izinze.
Lezi skateboard kagesi ilula malini futhi zisebenzisa. Okuxhunyanwa skateboard kagesi ayekade ekuqaleni yakhelwe ukuzwa Laphezu efanayo emabhayisikili nezimoto. Kunezinto eziningi ezinjalo skateboard kagesi out kuyatholakala emakethe manje, ukuthi esikhundleni enzima uhlola ibhodi ukuba bagibele ngisho isici ewumngcingo ezifana kuphela ijubane futhi ziyahlukahluka. Skateboard Electric unikeze indlela yokuphila izinzuzo ezinkulu nabagibeli futhi kungenzeka flip nsuku zonke beya ku okuhlangenwe nakho okuthakazelisayo. Ngokuyisisekelo ukuthuthukiswa kakhulu ubuchwepheshe uye walungisa lezi skateboard kagesi. Amamayela eziyisithupha kungaba ibanga anele Abokuqala zakuqala nabalandeli, noma abantu nge kokuhamba sisehlanganweni. Ngingu esijulile ukuyekethisa on kokuba isivinini ingasaphathwa futhi isukela into empeleni ephathekayo.
isikhathi Iposi: Mar-07-2018